Wholesale 600D Waterproof Trailerable Boat Cover Fit V-Hull Tri-Hull Fishing Ski Pro-Style Bass Boats Manufacturing and Factory |XGEAR
600D Saron'ny sambo tsy tantera-drano miendrika sambo V-Hull Tri-Hull fanjonoana Ski Pro-Style Bass Boats
XGEAR 600D Polyester tantera-drano sy anti-UV saron'ny sambo manerantany vita amin'ny lamba vita amin'ny vahaolana 600D maharitra miaraka amin'ny coating PU avo roa heny, ny hafainganam-pandehan'ny loko avo dia manome fiarovana ambony indrindra amin'ny toetr'andro sy ny fahasimbana.Misy karazana habe maromaro hifanaraka amin'ny haben'ny sambo.
●FITAOVANA NOhavaozina:Ny sambo XGEAR manarona adidy mavesatra tantera-drano dia vita amin'ny 600D mavesatra an-dranomasina kilasy polyester lamba misy urethane mifono.Tsara ho an'ny fitahirizana maharitra sy ny dia an-dalambe.
●DESIGN MAHATSIARO:Ny fanjairana roa misy tady dia nohamafisina tsara mba hampihenana ny rano miditra avy amin'ny fanjairana.Afaka manome fiarovana fanampiny ho an'ny ampahany lehibe amin'ny fanamafisana fiarovana fanampiny amin'ny zoro aoriana, afovoany ary eo anoloana.Ny hamandoana ao anatiny dia mora miala noho ny rivotra roa aoriana.Misy ihany koa ny taratra taratra mba hanomezana fahitana sy fiarovana fanampiny.
●Mora ampiasaina:Tonga miaraka amin'ny fonosana misy tady sy kitapo fitehirizana harato.Ny tady elastika amin'ny moron-tongotry ny farany ambany dia manome fitongilanana mafy.Ny famotsorana haingana buckles sy ny andilany rafitra miantoka mora azo.Izy io dia tonga lafatra ho an'ny trailering sy ny fitahirizana.
● Mba hanatsarana ny vokatry ny tantera-drano sy hanitarana ny androm-piainan'ny fonony, dia manoro hevitra mafy izahay ny hampiasa andry tohana mba hisorohana ny fivondronan'ny rano eo afovoan'ny fonony.
Ny Model C ihany no manana endrika nohetezana ho an'ny outboards.Modely A/B/D/E/F/G/H ho an'ny outboards sy inboards.
Ahoana ny fandrefesana ny sambonao:
1. Fandrefesana ny sakan'ny taratra: Refesina amin'ny tsipika mahitsy sy fisaka avy eo amin'ny sisiny amin'ny teboka midadasika indrindra amin'ny vata.
2. Fandrefesana ny halavan'ny tsipika afovoany: Ny fandrefesana mahitsy dia manomboka amin'ny tampon'ny tsipìka ka hatrany amin'ny faran'ny vodin-tsambo izay kasainao hosaronana, izay tsy tokony hampidirina ny maotera.
Azafady mba ataovy izay hahazoana antoka fa tafiditra ao anatin'izany ny fandeferana amin'ny haavon'ny lalamby mihoa-pampana, ny motera trolling, ny tohatra, ary ny sehatra transom sns. Aza mandrefy miakatra sy mihoatra ny fitaratra, seza, sns.
3. Jereo ny tabilao habe: Fidio ny habe tsara indrindra mihidy amin'ny halavan'ny sambonao sy ny sakany.
Mandrosoa mankany amin'ny habe manaraka raha latsaka amin'ny halavany ambony indrindra ny fandrefesanao!
Soso-kevitra:Tsara kokoa ny mampiasa tsato-kazo fanohanan'ny sambo mba hanitarana ny androm-piainan'ny saron'ny sambonao amin'ny alàlan'ny fisorohana ny rano tsy hivory eo ambony.
Ity 600D Polyester tantera-drano ity dia azo fehezina amin'ny saron-tsambo mavesa-danja mifanaraka amin'ny v-hull tri-hull fanjonoana ski pro-style sambo bass miaraka amin'ny habe feno.Mora ampiasaina:
1. Ampifandraiso amin'ny oron'ny sambo ny anoloan'ny fonony.
2. Apetaho eo amin'ny sisin'ny tranofiara ilay izy ary ampidiro ny fehezam-boninkazo.
3. Henjana tsara ny tady ary afatory ny tady be loatra.
4. Dingana farany: diniho ny fonony manontolo.
teo aloha: 8-ply Professional Heavy Battle Tady sy Fanenomana Tady ho an'ny Fanatanjahan-tena
Manaraka: XGEAR 2 ao amin'ny 1 Seza efitra fisakafoana azo aforitra miaraka amin'ny latabatra azo esorina ho an'ny tora-pasika fanjonoana sy picnics.